हे दैव : कोरोनाले फेरी लियो बेलायतमा एक नेपाली महिलाको ज्यान ! सेयर सेयर «
हे दैव : कोरोनाले फेरी लियो बेलायतमा एक नेपाली महिलाको ज्यान ! सेयर सेयर
Published : 14 April, 2020 7:41 am
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ का कारण बेलायतमा थप एक जना नेपाली महिलाको ज्यान गएको छ । सडवरी टाउनमा बस्दै आएकी पोखराकी पुष्पा घलेको कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण शनिबार ज्यान गएको बताइएको छ ।
त्यहाँ उनी एक होम केयरमा काम गर्दै आएकी थिइन् । बेलायतबाट सञ्चालिक एक अनलाइन नेपाली पत्रिकाका अनुसार ज्वरो र खोकी लागेपछि उनी घरमै आइसोलेशनमा बस्दै आएकी थिइन् । तर, शनिबार अचानक श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि घलेलाई नर्थवीक पार्क अस्पताल लगिएको थियो ।
अस्पताल पु-याइएको करिब ४ घण्टापछि घलेको निधन भएको र उनको मेडिकल रिपोर्टमा कोरोना पुष्टि भएको बताइएको छ । मृतक घलेकी श्रीमान र एक छोरा छन् । उनी करिब १० वषदेखि लण्डनको सडवरी टाउनमा बस्दै आएकी थिएन् । जानकारी अनुसार अहिले मृतक घलेकी स-परिवार आइसोलेशनमा बसेका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट बेलायतमा ९, अमेरिकामा पाँच र संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ ।